Ebunzini infraRed Thermometer Factory | Kwichina I-Forehead InfraRed Thermometer abavelisi, Abaxhasi
IAmazon ithengisa ithemometha yentloko yedijithali yoMntwana ene-fda ye-infrared thermometer evunyiweyo
Ithemomitha yabantwana yenzelwe ubungakanani beplastiki ye-ABS yokunyaniseka okuhlala ixesha elide. Le ndlebe yedijithali ye-infrared indlebe kunye ne-thermometer yebunzi inamaqhosha amabini asebenzayo alula kwaye kulula ukutshintsha indlela yokulinganisa. Umboniso ophakamileyo we-LCD ukhombisa ukufundwa okucacileyo nakwimeko eziphantsi neziqaqambileyo. I-thermometer mercury Ngobuchwephesha bokulinganisa obuphambili, le thermometer yendlebe yomkhuhlane womntwana inika iziphumo zokuthembela ezichanekileyo nezichanekileyo. Ngaphaya koko, iphantsi kokuqinisekiswa okuqinisekileyo kweklinikhi ngenkxaso yedatha ebanzi yeklinikhi kunye neengcali zonyango. Le ndlebe yedijithali ye-infrared indlebe kunye ne-thermometer yebunzi iza neebhetri ezimbini ze-AA kunye nengxowa yokugcina efanelekileyo. Inokukhumbula ukuya kufunda ama-20 ukuze ujonge imilinganiselo. Le thermometer yendlebe yomkhuhlane womntwana ikwaxhotyiswe nge-alarm fever ngelizwi.
Ithemomitha yedijithali yomlomo kwiFever Thermometer yonyango ngomlumkiso womkhuhlane
I-Thermometer yomlomo kunye ne-thermometer ye-iproven yabantwana kunye nabantu abadala ifuna kuphela imizuzwana eyi-10-20 ukujonga umkhuhlane. Ithemometha iye yavavanywa kwakhona ukuba iphinde ichaneke ngokwaseklinikhi ngayo yonke imilinganiselo oyithathayo, Thatha ubushushu babantwana bakho ngasemva ngokukhuselekileyo nokuba umntwana wakho uyajikeleza. Iingcebiso ze-thermometer zedijithali eziguqukayo zikwimo yomlomo wakho xa unenjongo yokusebenzisa ithemometha ngomlomo.
I-Thermometer yomntwana ongafakwanga infrared yeFever, ibhloko yentloko yeThemometha yaBadala
I-Thermometer yebunzi yenzelwe yonke iminyaka, abantu abadala, iintsana kunye nabadala. Ukongeza ekulinganiseni ibunzi, inokulinganisa igumbi, into kunye nobushushu bolwelo. Ukhetho olukhulu kwiintsapho, iitalari, iihotele, isikolo. ℃ kunye ℉ zitshintsheka ngokulula.